Ogaden News Agency (ONA) – Qaramada Midoobay: Cadaadiska Itobiya ay ka wado Ogadenya
Qaramada Midoobay: Cadaadiska Itobiya ay ka wado Ogadenya
Maalinta Talaadada ee 13ka September 2011 waxay UNPO iyo Ururka u dooda shucuubta amaandarada haysato (Society for Threatened Peoples) iska kaashan doonaan fadhiga 18aad ee Golaha Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobay (United nations Human Rights Council) ee cinwaankiisu yahay Cadaadiska Ogadenya – Xuquuql Insaanka Gobolka Somalida Itobiya (Oppression in the Ogaden: Human Rights in Ethiopia’s Somali Region), fadhigaa oo ka dhici doona xarunta QM 11:00 – 13:00.
2da urur ee UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization) iyo African Rights Monitor (ARM) ayaa waxay baadhitaan dheer ka soo sameeyeen xadgudubyada ka dhacaya Ogadeya iyo Oromiya halkaasoo ay ku soo arkeen arimo aad looga argagaxo inkstoo indhaha caalamka aanu u soo jeedin goboladaa. Waxaa kaloo ay ururada xuquuqul insaanka u dooda ee NGO,s ka loo yaqaano oy ka mid tahay Human Rights watch iyo Amnesty International iyo Genocide Watch iyo xukuumadaha reer galbeedka iyo warbaahino madax banaan iyo Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Mareykanka ay intaba keeneen dukumentiyo muujinaya xadgudubka lagu hayo shacabka. Hasa ahaatee dhibaatooyinka haysta shacabka Ogadenya lagama hadlo inta badan xataa Qaramada Midoobay. Hadaba fadhigan ayay ujeedadiisu tahay in aamuskaa wax laga qabto oo caalamka uu u soo jeedsado xadgudubka xuquuqda aadanaha ee ka jira Itobiya oo idil gaar ahaan in tooshka lagu ifiyo xadgudubka joogtada ah ee ka socda gobolka Ogadenya.
Waxaa fadhiga lagu daawan doonaa warbixintii ugu dambaysay ee BBC Newsnight iyo Bureau of Investigative Journalism ay iska kaashadeen ee lagu soo bandhigay Teleefishinada caalamka. Waxaa kaloo madasha fadhiga iman doona dad markhaati ah oo ka warami doona xadgudubyadii loo gaystay. Waxaa kaloo goobjooge ka ahaan doona Angus Stickler oo ah wariyihii ka socda Bureau of Investigative Journalism ee barnaamijka soo diyaariyay oo isaguna waxyaaba badan ka hadli doona. Waxaa jiri doona waqti fiican in la siiyo su’aalaha iyo jawaabaha iyo doodaha.
Wuxuu ka codsanayaa xafiiska Xoghaya Guud ee UNPO in lagala soo qaybgalo fadhigan oo noqon doona mid aad u xiisa badan iyagoo ku baraarujinaya qofkii su’aal qaba inuusan ka maagin kana xishoonin inuu kala soo xidhiidho xafiiska UNPO cinwaanadan;
*la soo xidhiidh Lisa Thomas oo ah Xoghaynta UNPO l.thomas@unpo.org maalinta Friday, 11ka September, si luguugu diyaariyo galitaanka hadaad rabto goobjoog ka ahaato fadhiga
Faafaahinta Fadhiga waa sidan;